धुमधामले बिहे गरेकी सोनम कपुर हनिमुन जान किन पाइनन् ? | Rajmarga
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुरले मंगलबार लामो समयदेखिका ब्वाइफ्रेण्ड आनन्द आहुजासँग बिहे गरिन् । निकै धुमधामसँग बिहे गरेकी सोनम हनिमुन भने जान नपाउने भएकी छिन् । हनिमुनको समयमा उनी निकै व्यस्त हुनुपर्ने भएको छ ।
सोनम यतिसम्म व्यस्त हुनुपर्ने कारण हो कान्स फिल्म फेस्टिभल । यो फेस्टिभल ८ मे देखि सुरु भइसकेको छ । यही दिन सोनमको बिहे भएको थियो । यो फेस्टिभलमा सोनमको प्रस्तुती आगामी मे १४ सोमबारका दिन छ । यस दिन मान्समा जाँदा समेत सोनम माइती मुम्बइबाट नभइ घर दिल्लीबाट जानेछिन् । यस वर्ष कान्समा उनी हातमा चुरा लगाएर उपस्थित हुनेछिन् ।
कान्स सकिएपछि पनि सोनम हनिमुन जान पाउने छैनन् । यसलगत्तै उनी फिल्म वीरे दी वेडिङको प्रचारप्रसारमा जुट्नुपर्नेछ । यो फिल्म १ जूनमा रिलिज हुँदैछ । फिल्म रिलिज हुँदासम्म सोनमले फुर्सद पाउने छैनन् । यतिसम्म कि १ जूनपछि पनि उनको व्यस्तता घट्ने छैन । यसलगत्तै उनी फिल्म जोया फ्याक्टरको सुटिङमा व्यस्त हुनुपर्ने छ ।
Previous post: किन पिउने तामाको भाँडामा रखिएको पानी ?
Next post: रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो आज देखाइने, उपत्यकामा सार्वजनिक विदा